Madaxweynaha Jubbaland oo ku laabtay Kismaayo - BBC News Somali
Image caption Waftiga Jubbaland iyo Ra'iuslwasaare Kheyre
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaamoo muddo 10 maalmood ah ku sugnaa magaalada Muqdisho, ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo.
Laabashadiisa ayaa imanaysa xilli aad la'isula dhexmarayay warar aan la xaqiijin karin hubantidooda.
Xalay saqdhexe ayaa waxaa la faafiyay muuqaalo iyo sawirro muujinaya kullan casho sharaf ah oo uu Ra'isulwasaare Xassan Cali Kheyre u sameeyay madaxweyne Axmed.
Madaxweyne Axmed oo saxaafadda kula hadlay garoonka Kismaayo ayaa sheegay in wadahadaladii la galay la'isku afgartay, kulamo kalena ay laabanyihiin. Balse waxa uu ka digay in balanqaadyada dhanka federaalka la fulin waayo, taas oo uu sheegay haddii ay dhacdo in dhankooda ay ka bixi doonaan.
Axmed Madoobe waxa uu Muqdisho gaaray 24-kii bishii tagtay, isaga oo ka jawaabayay casuumaad oga timid madaxweynaha federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si Xamar loogu dhameeyo madmadoow la sheegay in uu soo kala dhex galay Jubbaland iyo dowladda federaalka.
Socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib safar uu Ra'isulwasaare Xassan Cali Kheyre ku tagay magaalada Kismaayo, halkaas oo la shaaciyay in xal laga gaaray waxyaabihii ay isku hayeen labada dhinac, laguna balamay in Muqdisho lagu dhameeyo.
Ma jiro wax kulan ah oo la shaaciyay oo dhexmaray Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo, balse illo lagu kalsoonyahay waxa ay BBC-da u sheegeen in ay dhaceen kulamo albaabada u xiranyihiin oo dhexmaray labada dhinac.
Sidoo kale ma jiraan wax faahfaahin ah oo laga bixiyay waxyaabaha laga wada hadlay ama la'isku afgartay, ama la'isku fahmi waayay, haddiiba ay jiraan.
Maxaad kala socotaa booqashada Kheyre ee Kismaayo?
Hase yeeshee hadal haynta ugu badan todobaadkan guud ahaan Soomaaliya, waa joogitaanka Axmed Madoobe ee Muqdisho, taas oo aan la haynin cid sharaxaad ka bixisa oo labada dhinac ah.
Waxaa arrimaha xiiso usii yeelaya in ay aad usoo dhowdahay doorashadii madaxtinimo ee Jubbaland, taas oo lagu wado in ay dhacdo bisha Agoosto.
Madaxweyne Axmed ayaa maalmo ka hor intii uusan Muqdisho u kicitimin magacaabay guddi doorasho, kaas oo saacado gudahood uu ku ansixiyay baarlamaanka Jubbaland. Xildhibaanada baarlamaanka cusub ee madaxweynaha dooran doona ayaan isaguna weli la xulin.
Waftiga Jubbaland ee Muqdisho waa mid balaaran, waxaana qeyb ka ah guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdiraxmaan, kaas oo khudbado ka jeediyay furitaanadii labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa ka mid ah koox wasiiro ah, oo ay ka midyihiin dad Soomaaliya caan ka ah sida wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Warsame Darwiish oo horey usoo noqday agaasimihii nabad suggida Soomaaliya.
Waftiga Jubbaland ayaa xalay intooda badan ka qeybgalay casho sharaftii guriga Ra'isulwasaaraha ka dhacday, balse dhanka xukuumadda Federaalka waxaa sawirrada kaliya ka muuqday wasiirka amniga Maxamed Abuukar Isloow.
War aad u kooban oo kusoo baxay qalabka warbaahinta dowladda maamusho ayaa lagu soo koobay in ay casho sharaf dhacday, waxaana kaliya casho sharafta ka hadlay wasiirka madaxtooyada Jubbaland Xirsi Gaani, halka dhanka dowladda aanan cidna lasoo xigan, mana jirin wax faahfaahin ah oo warkan ku jiray oo aan ka ahayn in casho sharaf uu Ra'isulwasaaraha u sameeyay madaxweynaha Jubbaland.
Warar kusoo baxay warbaahinta madaxa banaan qaarkood ayaase sheegayay in casho sharafta ay ahayd mid sagootin ah, mise jirto cid xaqiijisay arrinkaas.
Inta badan musharixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Jubbaland ayaa ku sugan magaalada Muqdisho, waxayna u badanyihiin siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka ama xiriir wanaagsan la leh. Waxaa sidoo kale Muqdisho ku sugan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soo xuli lahaa xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland.